Fandehanana mafy teny amin’ny Route digue Nifampitrongy ny Taksibe 194 sy ny Fiara 3 CV
Lalam-pirenena RN1 Bis Kamiao roa tra-tehaka nitondra hazo voarara
Kamiao roa no saron’ny zandary tamin’ny lalam-pirenena voalohany Bis (RN1 bis) nitondra hazo voarara ny alin’ny 18 febroary 2020.
Nitrangana lozam-pifamoivoizana teny amin’ny digy, sampanana hiazo an’Ambohitrimanjaka, omaly alatsinainy 22 jolay maraina. Taksibe ao amin’ny zotra 194 avy any Andranomena no nifandona
tamina fiara 3 CV iray ka samy nisy naratra avokoa tao anatin’ireo fiara roa ireo. Raha ny vaovao azo, vokatry ny tsy fitandremana sy ny fandehanana mafy loatra no nahatonga ny loza. Na izany aza tsy nisy ny namoy ny ainy. Nahazo vahana indray ny lozam-pifamoivoizana tato ho ato. Ankoatra ireo mpitaingina môtô dia misy hatrany ireo fiara lasibatra ka tokony samy hitandrina ny tsirairay. Nitarika fitohanana goavana teny amin’iny digy mivoaka an’Andohatapenaka iny moa ity lozam-pifamoivoizana nitranga teny an-toerana, omaly ity ka tsy vitsy ireo voatery niverina na niova lalana mihitsy.